पाखामा झुल्दै जापानी येन ! « Mechipost.com
पाखामा झुल्दै जापानी येन !
प्रकाशित मिति: १६ कार्तिक २०७७, आईतवार ०९:३६
फिदिम, कात्तिक १६ गते । पाँचथरका पाखामा अहिले जापानी येन फल्न थालेको छ । येनको कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको अर्गेलीको उत्पादन र जापानको बजार राम्रो रहँदा यहाँका किसान उत्साही भएका छन् । रैथाने अर्गेली जापानमा महँगोमा बिक्न थालेको र मूल्य पनि बर्सेनि बढ्दा किसान उत्साहित भएका हुन् ।
चार वर्षअघि प्रतिकिलो ६० रुपियाँ सम्ममा मात्र बिक्ने गरेको अर्गेलीको मूल्य अहिले प्रतिकिलो ५२० रुपियाँ पुगेको छ । यतिको महँगोमा अर्गेली बिक्न थाल्दा किसानमा खुसीको सीमा नै छैन ।
तीन वर्ष अगाडिबाट मूल्य निकै बढेर प्रतिकिलो ४४५ रुपियाँमा पुगेको थियो । त्यसको केही समयपछि ४९० रुपियाँ पुग्यो । अहिले त्यो पनि बढेर ५२० रुपियाँ पुगेको हो । यतिको मूल्य किसानले घरमै पाउने गरेका हुन् ।
व्यापारीबाट मूल्य अझै बढाइदिने आश्वासन पाइरहेको किसान बताउँछन् । जापानिज प्रविधिबाट बफ्याइएको अर्गेली बोक्रा महँगोमा बिक्ने गरेको हो । राम्रो मूल्य दिन थालेर अर्गेलीले आफूहरूलाई धेरै खुसी बनाएको सिदिनका राजकुमार जवेगुले बताउनुभयो । यसको खेती विस्तारमा पनि आफूहरू उत्साहित भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
यसका साथै विगतमा खासै प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको अर्गेली खेती हिजोआज किसानको पहिलो रोजाइमा पर्न थालेको छ । जापानी मुद्रा (येन) बनाउने कच्चा पदार्थका रूपमा पाँचथरबाट अर्गेली बोक्रा बिकिरहेको हो । सिदिनको दाजुभाइ जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धनमा जापानमा अर्गेली बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यहाँ उत्पादित अर्गेली येनका लागि गुणस्तरीय रहेकाले यसको माग पनि उच्च हुँदै गएको छ । यसले गर्दा माग नै धान्न गाह्रो भइरहेको अर्गेली कृषक जवेगुले बताउनुभयो । हाल जापानबाट बफ्याइएको डेढ सय टन अर्गेली बोक्रा माग भइरहेको जनाइएको छ ।
जापानी मागको २६ प्रतिशत अर्थात् ४० टनसम्म मात्र आपूर्ति भइरहेको दाजुभाइ सहकारीका अध्यक्ष होमराज थाम्सुहाङले बताउनुभयो । पछिल्लो समय पाँचथरबाट मात्रै २० टनसम्म निकासी भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । यति परिमाणको अर्गेली जापानमा बिक्दा यहाँका किसानले एक करोड रुपियाँभन्दा बढी हात पारेका छन् ।
पहिले सस्तोमा अर्गेली बेच्नुपर्ने समस्या झेलेका किसानले आकर्षक मूल्य पाउन थाल्दा उनीहरू धेरै खुसी बनेका हुन् । यसको खेती गर्नमा पनि जाँगर बढाएका छन् । यससँगै हुँदै गएको अर्गेली रोपण वृद्धिले अहिले पाँचथरका नाङ्गा पाखा, चउर हरियालीमा परिणत भएका छन् ।
पाँचथरमा वर्तमानमा सात हजार किसानले ५० हजार रोपनी जमिनमा अर्गेली खेती गरिरहेका जनाइएको छ । यहाँको फालेलुङ गाउँपालिकाको सिदिन, प्राङ्बुङ, मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको साराङ डाँडा अर्गेलीको पकेट क्षेत्र हो । रोपेको पाँच वर्षपछि अर्गेलीको बोक्रा उप्काएर बेच्नयोग्य हुन्छ ।
माग धान्नै नसक्ने गरी महँगोमा किनबेच हुन थाल्दा अहिले अरू बाली लाग्ने जमिनमै रोप्न थालिएको छ । अर्गेलीमा रोग, कीरा नलाग्नुका साथै बस्तुभाउले पनि खाँदैन । रोपेपछि गोडमेल, सिँचाइको समेत आवश्यकता पर्दैन ।
यसरी खेती गर्नमा पनि सरल हुनाले पनि किसानको अर्गेली खेती मोह बढ्दै गएको छ । यहाँका साबिक गाविस च्याङ्थापु, फलैँचा, ओयाम, मेमेङ, लुङरुपा, नागीन, रवि, पौवासारता, फाक्तेपमा पनि अर्गेली खेती हुने गरेको छ । (नारायण तुम्बापो, गोरखापत्र अनलाइनबाट साभार)